> Resource > Mac > Download DVD cirib u Mac Alternative
DVD cirib waa xor ah oo si sahlan loo isticmaali software DVD qoraalka, laakiin u shaqeeya Windows oo keliya. Hadda waxaad haysataa Mac ah. Ma jiraa wax u dhigma ah in DVD cirib u Mac leh la mid ah, oo isku mid u ah oo lacag la'aan ah?
Inta aan ka ogahay, ma jiro codsi la mid ah DVD cirib lacag la'aan ah. Wixii version lacag, waxaan ugu Wondershare si dabiici ah ku talinaynaa DVD Creator for Mac (Snow Leopard, Libaaxa, libaax buurta taageeray.). Barnaamijkan wuxuu la mid ah DVD cirib for Windows shaqeeyaa: waxa uu caawiyaa aad dajiyaan files video, qoraa menu DVD ka template ah, iyo ugu dambayntiina badalo files iyo gubi in DVD disc la gubi DVD aad computer. Marka loo eego DVD cirib, DVD abuura u Mac yimaado la interface ah dareen iyo user-friendly, taas oo ka dhigaysa in ay suurtagal tahay in ay gubaan video inay DVD waqti. Isku day for free halkan.
Fiiro gaar ah: barnaamijka taasuna waxay ka timaadaa iyadoo version Windows ah: Wondershare DVD Creator . Qaababka ugu muhiimsan waa isku mid: taageero ballaaran format, qaadashada slideshow, menu abuurka DVD, qalabka tafatirka video waxtar leh iyo DVD fiicnayn leh tayo sare leh oo gubanaya. Hoos hage qaadataa shaashada Mac ah.
1 dar video iyo / ama sawir files
Markii barnaamijka laga furay, waxaad dooran kartaa in la abuuro mashruuc cusub ama la furo mashruuc jira. Halkan waxaan ku dooro "Abuur Project New a". Waxaad arki doonaa daaqadaha aasaasiga ah sida hoos ku qoran. Next, waxaad ku dari kartaa files warbaahinta in DVD Creator in 2 siyaabood: si toos ah jiidi videos ama sawiro barnaamijka ama guji "+" badhanka si ay u dar.
Fiiro gaar ah : Waxaad koox yar videos si wadajir ah u abuuri karaan cutub ku saabsan DVD menu. Haddii aad rabto in aad ku dhaqaajiyaan, jiidi clip ka soo Murayaad ilaa muuqataa line buluug ah.
t Kala duwaan ka mid ah qalabka tafatirka caawiyo in aad kor u files warbaahinta aad, oo ay ku jiraan Dalag, isku beddesha, goo, watermark, Raadka, iwm In sidaa la yeelo, dooro video ah oo guji "Edit" button in la furo suuqa kala tafatir ah.
DVD cirib yimaado iyada oo tiro kooban oo arrimo DVD menu. Halkan ayaa ah meesha DVD Creator for Mac uga fiican yahay. In ka badan 90 dhaceen oo ma guurto ah arrimo menu DVD waxay ku jiraan DVD cirib u Mac (libaax buurta, libaax oo taageeray). Oo iyaga waxaa la waxaad samayn kartaa menu qurux badan DVD ee flash ah. In sidaa la yeelo, beddelaan oo keliya in ay "Menu" tab hoose, iyo dooran template ah menu jecel yahay si aad u bilowdo. Next, bedelaan muqaalka soo jeeda, music soo jeeda, booska item, iwm si ay u shakhsi. Haddii aadan u baahnayn menu ah, dooro "Menu No". Dhammaan videos waxaa la ciyaari doonaa mid ka mid ah oo kale ka dib.
Riix ah "Kulanka Xiisaha Leh" button in eegno oo idil DVD movie sida waxa aad ka sameeyso TV. Ugu dambayn, geliso DVD disc maran in aad DVD gubi oo guji "Guba" badhanka si ay u bilaabaan gubanaya DVD disc la cirib DVD, waayo, Mac codsi kale.
Auto u Khushuucsan: Haddii mashruuca DVD aad ka ballaaran yahay 4.7G oo aadan haysan ah DVD9 disc (7.9g), kaliya geliso disc DVD5 ah, codsiga si toos ah resize doonaa filimaan aad u haboon disc DVD5 ah (4.7G).